Home / ကိုယ့်ရဲ့ Stress တွေကို Success ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပြောင်းလဲကြမလဲ?
“The key to winning is poise under stress.” ဆိုတဲ့ စကားလိုပါပဲ။
ကျွန်တော်အပါအဝင် လူအများစုမှာ တူညီတာတစ်ချက်က ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာ ကိုယ့် Career မှာ Success ဆိုတဲ့ အောင်မြင်မှုကို တောင့်တကြသလောက် Stress ဆိုတဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုတော့ ခံနိုင်ရည် မရှိတတ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
Successful Career နဲ့ Stressful Life ဆိုတာ အနည်းနဲ့အများတော့ ဒွန်တွဲနေကြတာချည်းပါပဲ။
ဖြေရှင်းလို့မရတဲ့ ပြဿနာတွေကြောင့် Stress ဖြစ်တယ်။ ဖြေရှင်းလို့ရပြန်တော့လည်း ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုပြီး Stress ဖြစ်ပြန်တယ်လေ။ နေ့စဉ် ဘဝထဲမှာ မလွဲမသွေ ကြုံနေရတဲ့ စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာ စိတ်အလိုမကျမှုတွေ အကုန်လုံးကလည်း စိတ်မထားတတ်သူအတွက်တော့ Stress တွေပါပဲ။
မြန်မာစကားမှာရှိတဲ့ ပြဿနာပေါင်း တစ်သောင်းခြောက်ထောင် ဆိုတဲ့ စကားကို ကျွန်တော်တို့တတွေ ဟာသ တစ်ခုအနေနဲ့ ဆိုတတ်ကြပေမယ့် တကယ်တမ်းကြ လက်တွေ့ဘဝမှာ အမှန်တကယ်ကို ပြဿနာတွေ၊ စိတ်ဖိစီးမှုတွေဆိုတာ များပြားလှပါတယ်။မိသားစုရေး၊ လူမှုရေးတွေအပြင် ကိုယ်နေ့စဉ် နာရီပေါင်းများစွာ ကျင်လည်နေတဲ့ လုပ်ငန်းခွင်တွင်းမှာပါ စိတ်ဖိစီးစရာ စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာဆိုတာ တစ်ခုမကဘဲ အမြဲလိုလိုရှိနေတတ်တာဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ ဒီ Stress ဆိုတာကြီးနဲ့က ရှောင်လွှဲနေလို့ကို မရတာပါ။
ဆိုတော့ ဒီ Stress ဆိုတာကြီးကို ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လို ရင်ဆိုင်ကြမှာလဲ?
Fight or Flee ပါ။
အကယ်၍ သင်က ကိုယ့်ဘဝမှာ ကြုံနေရတဲ့ ဒီလို Stress တွေအကုန်လုံးကို တိုက်ထုတ်ပြီး Success အဖြစ် ပြောင်းလဲ ချင်နေတဲ့ သူဆိုရင်တော့ ဒီဆောင်းပါးလေးကို အပြီးထိ ဖတ်ကြည့်ဖို့ အကြံပေးပါရစေ။
ကဲ … ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စိတ်ဖိစီးမှု Stress တွေကို တိုက်ထုတ်ကြမယ်။ အောင်မြင်မှု Success အဖြစ်ပြောင်းကြမယ်ပေါ့။
ဆိုတော့ ဘယ်လို နည်းတွေနဲ့ ပြောင်းရမလဲ ကြည့်လိုက်ရအောင်။
Stress ကို လက်ခံတတ်ပါစေ။
“It’s always stressful at the top.” ဆိုသလိုပါပဲ။ ကိုယ်က အခြားသူတွေထက် အမြင့်ရောက်လေ စိတ်ဖိစီးမှု ဆိုတာမျိုးက များများကြုံရလေပါပဲ။ ဒီနေရာမှာ အရေးကြီးတာက Stress ကို လက်ခံနိုင်ဖို့ပါပဲ။ လက်ခံနိုင်ဖို့ဆိုတာက ကိုယ့်ဆီမှာ အကြာကြီး သိမ်းထားရမယ်လို့ ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ အကယ်၍များ ကိုယ်က လုပ်ငန်းခွင် နယ်ပယ်မှာ အရေးကြီးတဲ့ Position တစ်ခုက လူတစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တဲ့အခါ ဒါဟာ ကိုယ်တိုင် တာဝန်ယူ ဖြေရှင်းရမယ့် ပြဿနာဆိုတဲ့ တာဝန်ယူမှုနဲ့ အတူရင်ဆိုင်လက်ခံလိုက်ပါ။ ဒါမှလည်း ဘယ်လို နည်းနဲ့ အောင်မြင်အောင် ဖြေရှင်းနိုင်မယ်ဆိုတာ ကိုယ်တိုင် သိမြင်လာနိုင်မှာပါ။
Stress ဆိုတာ အကူအညီ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ တွေးပါ။
Stress တိုင်းက ကိုယ့် အတွက် မကောင်းတာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ အချို့သော Stress တွေက ကျွန်တော်တို့ အတွက် Motivation တောင် ဖြစ်စေနိုင်ပါသေးတယ်။ တကယ်တမ်းကျ Stress ဆိုတာ ဘာဖြစ်လာမယ်မှန်း မသိတဲ့ အခြေအနေတစ်ခုကို ကြိုတွေးမိရင်း ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ စိတ်ခံစားချက်တစ်ခုလို့ ဆိုလို့ရပါတယ်။
ဒါကြောင့် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှာ ကြုံတွေ့ရသမျှ Stress တိုင်းကို Negative ဘက်က ခံစားရင်း တွေးပူနေမယ့်အစား ကျွန်တော်တို့ အတွက် ပိုကောင်းနိုင်မယ့် Result တစ်ခု ရရှိလာနိုင်မယ့် အခွင့်အရေးလို့ Positive ဘက်က ပြောင်းမြင်ပြီး အခက်အခဲတိုင်းကို ဖြေရှင်းပါ။
Stress ဆိုတာ ခံနိုင်ရည်ရှိလာအောင် သင်ကြားပေးနေတယ်လို့ မှတ်ယူပါ။
သေချာတာကတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်မှာ Stress သာ မရှိခဲ့ရင် ကျွန်တော်တို့လည်း ထင်သလောက် Productive ဖြစ်လာကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အလုပ်တွေ မြန်မြန်ဆန်ဆန် အပြီးသတ်နိုင်ဖို့လည်း Motivated ဖြစ်နေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပြောရမယ်ဆိုရင် Stress က ဘဝရဲ့ အခက်ခဲဆုံး အချိန်တွေ ကြုံလာတိုင်း ကိုယ်ဘယ်လို ခံနိုင်ရည် ရှိရှိ ဖြတ်သန်းရမလဲ ဆိုတာကို သင်ကြားပြသလိုက်တဲ့ သဘောပါပဲ။ ဒီလို အခက်အခဲတွေကို မကျော်ဖြတ်နိုင်ပဲ အောင်မြင်မှု ရရှိနိုင်မှာ မဟုတ်သလို အောင်မြင်မှု လမ်းကြောင်းကို လျှောက်လှမ်းနိုင်ဖို့ ဆိုရင်လည်း ဘယ်လို အခြေအနေမျိုးကိုမဆို ခံနိုင်ရည် ရှိရှိ ကျော်ဖြတ်နိုင်မှ အဆင်ပြေမှာပါ။
Stress ဆိုတာ ကိုယ့် Limit ကို သတိပေးနေတယ်ဆိုတာ သိပါစေ။
ကျွန်တော်တို့ အားလုံးက စက်ရုပ်မဟုတ်တဲ့အတွက် တစ်နေ့တာလုံးတော့ အလုပ်မလုပ်နိုင်ကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့် တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး တစ်နေ့တာ ဖြတ်သန်းပုံချင်း မတူကြသလို ှStress Level ကို ခံနိုင်တဲ့ Limit ချင်းလည်း မတူညီကြပါဘူး။
ဒီတော့ လုပ်ငန်းခွင်မှာ အလုပ်တာဝန်တွေကြောင့် Stress ဖြစ်ပြီဆို အရင်ဆုံးတွေးသင့်တာက ကိုယ့်ရဲ့ Limit က ဒီထက် ခံနိုင်ရည် မရှိတော့တာလား? ဒီလို မဖြစ်အောင် ဘယ်လို အချက်တွေနဲ့ ကြိုးစားပြင်ယူရမလဲ စတဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဆန်းစစ်ချက်တွေ လုပ်သင့်နေပါပြီ။ ဘယ်လို အခြေအနေမျိုးမှာ မဆို Stress ဖြစ်လာခဲ့ရင် အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ ရလဒ်ကို ချပြဖို့ ခဲယဉ်းသွားပါပြီ။ ဆိုတော့ Stress တွေ ဖြစ်မလာအောင် ကိုယ့်ရဲ့ Workload ကို ချိန်ဆပါ။ ကိုယ်ဟာ ၂၄နာရီ အလုပ်မလုပ်နိုင်ဘူး ဆိုတာ သတိထားပါ။ ကိုယ့် Limit ကို ကိုယ်သိပါ။ အကောင်းဆုံး လုပ်နိုင်စွမ်းရည်တွေနဲ့အတူ အများနဲ့ မတူတဲ့ Performance တွေ ချပြရင်း အောင်မြင်မှုကို အရယူလိုက်ပါ။
Stress ဆိုတာ ထိန်းချုပ်လို့ မရတဲ့ အရာဆိုတာ သိထားပါ။
ဘဝရဲ့ သုံးပုံ တစ်ပုံလောက်က ဘာဖြစ်လာမယ်ဆိုတာ ကြိုမသိနိုင်တဲ့ အခြေအနေတွေနဲ့သာ ဖြတ်သန်းနေရတာပါ။ ကျွန်တော်တို့အားလုံးက ဖြစ်လာတဲ့ အခြေအနေတစ်ခုအပေါ်မူတည်ပြီး စီမံခန့်ခွဲမှုတွေပြုလုပ်လို့ရပေမယ့် ဘာဖြစ်လာမလဲ ဆိုတာကိုတော့ အလုံးစုံ ကြိုတင် ထိန်းချုပ်ထားနိုင်စွမ်းမရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့် Stress ကိုမထိန်းချုပ်ပါနဲ့။ ဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေပေါ်ကိုသာ မူတည်ပြီးတော့ ဘယ်လို အကောင်းဆုံး ရင်ဆိုင်မယ်ဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်မှုကို ချမှတ်ပြီး ရင်ဆိုင်ပါ။
Stress ဆိုတာ ပြဿနာကို တွေးတာပါ။
ပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့တွေးတာနဲ့ ပြဿနာကို ထိုင်တွေးနေတာနဲ့က လုံးဝကွဲပြားပါတယ်။ ကိုယ့် လုပ်ငန်းခွင်မှာ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ပြဿနာတိုင်းကို ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပဲ ထိုင်တွေးနေတာထက် ဘာကြောင့်ဖြစ်လို့ ဘယ်လို ဖြေရှင်းရမလဲ ဆိုတာကိုသာ အချိန်ယူစဉ်းစားပါ။ ဘဝရဲ့ အောင်မြင်မှုတိုင်းလိုလိုမှာ ဘယ်လို အခက်အခဲ အနှောက်အယှက်ကိုမဆို မြန်မြန်ဆန်ဆန် Move on လုပ်နိုင်တဲ့ စိတ်ဓာတ်နဲ့လည်း ဆိုင်ပါတယ်။ This too, shall pass away ပါ။
ဆိုတော့ ကိုယ့်ရဲ့ အဆိုးဆုံးသော အခြေအနေတွေကနေ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို ခွာချပြီး ရရှိခဲ့တဲ့ အောင်မြင်မှု ပန်းတိုင်းကို ပြန် သုံးသပ်ကြည့်ပါ။ တကယ်တော့ Stress ဆိုတာ Success ဆိုတဲ့ ပန်းတိုင်ကို သွားရောက်ဖို့ တံခါးပေါက်တစ်ချပ်ပါပဲ။ အခွင့်အရေးလို့ ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။
ကိုယ့် Stress တွေကို အတောင်ပံတပ်ရင်း အောင်မြင်မှု ပန်းတိုင်ရှိရာကို အမြင့်ဆုံး ပျံသန်းလိုက်ပါ။